“म मर्न तयार छु ,सत्यको लडाईमा झुक्न तयार छैन्” | Image Channel Blog | ImageKhabar.com
होमपेज / ब्लग / “म मर्न तयार छु ,सत्यको लडाईमा झुक्न तयार छैन्”
“म मर्न तयार छु ,सत्यको लडाईमा झुक्न तयार छैन्” Published: March 29, 2015 | आईतवार 15 चैत, 2071 | 5:30 AM | By Shreebabu Karki | Viewed: 7299 times
श्रीबाबु कार्की ।
सन् २००८ मा वर्मामा ठूलो आँधी आयो आँधीले धेरै वर्मेली आहात भए । उनीसंग त्यस बेलाको एउटा अप्रिय घटना छ । त्यतिबेला वर्मा सरकारले विदेशीलाई आँधी प्रभावित क्षेत्रमा जाने अनुमती दिएको थिएन । तर डा. गोविन्द केसी एउटा शिक्षकको सहयोमा वर्मा पुगे । वर्मेली भेषमै । त्यहाँ उनले सयौको उपचार गरे । डाक्टरहरुलाई प्रशिक्षण दिए । तर त्यस बेला उनलाई र उनको सहयोगीलाई वर्मा सरकारले चिनेको भए १५ वर्ष जेल हाल्न सक्थ्यो । झण्डै दुई दशक उमेर प्राध्यापन र चिकित्सा क्षेत्रमा विताएका यी डा.संग सम्पत्तिको नाउमा एउटा ल्यापटप , एक थान टेलिभिजन र भर्खर मात्र किनेको एउटा मोवाइल छ ।
महात्मा गान्धीबाट निक्कै प्रभावित डा. गोविन्द केसी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा दृढ छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा वृहत्तर सुधार गर्ने अभियान्ताका रुपमा गान्धीवादी चरित्र बोकेका केसी एक पटक पुनः आमरण अनशनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको छिडीमा छन् ।
म मर्न तयार छु , सत्यको लडाईमा झुक्न तयार छैन् भन्दै सत्यको लागि आफ्नो प्राणको आहुती दिन तयार भएर उनी पाँचौ पटक अनशन बसिरहेका छन् । डा. केसीको आमरण अनशनले समग्र नेपालीहरुमा एउटा विशेष तरङ्ग पैदा गराएको छ ।
केही लोभिपापी,स्वर्थी ,हाइब्रिड वौद्विकहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरु डा. केसीको यो निरन्तर सत्याग्रहले आतङ्कित मात्र छैनन् उनको यो कदमबाट ‘चिनीमा कसरी अमिलो खोज्न सकिन्छ’भन्ने कुत्सीत मनशायले कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । डा. गोविन्दको ठूलो हतियार भनेकै यही हो-सत्याग्रह ।
सामान्य आँखाले झट्ट हेर्दा डा.गाविन्द उस्तो विराट र भव्य लाग्दैनन् । औसत मानिसभन्दा भिन्न छैनन् पनि । होचो कद , खुइलिएको तालु, ख्याउटे अनुहार र साधरण पहिरन मन पराउने उनी आफुलाई कम र विरामीको बढी महत्व दिन मन पराउँछन् । नेपालको कुनै त्यस्तो भूगोल छैन्-जहाँ झोलामा औषधी बोकेर डा.केसी नपुेकाहु्न् ।
विपत्ति र विरामीका पर्याय डा.केसी स्वदेशमा मात्र ओषधी बोकेर पुग्दैनन् । विदेशका धेरै प्राकृतिक विपत्तीहरुमा निःशुल्क उपचार गर्न पुगिरहेकै हुन्छन् । फिलिपिन्समा आएको आँधीमा होस् या पाकिस्तान र भारतको गुजरातको भूकम्पमा होस उनी पुगेकै छन् । हाइटी,वर्मा, बंगलादेशका भूकम्प र आँधी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आफ्नै खर्चले उपचार गरेर उनले केही बटुले भने त्यो ‘धमर्’ नै हो । उनी भन्छन् – चिकित्सा क्षेत्र मेरो जागिर होईन । ‘धर्म’ हो । उनी जीवनमा कहिल्यै पैसाको पछि लागेनन् । क्लिनिक खोल्ने र त्यसमा काम गर्ने जागर गरेनन् ।
सरकारी अस्पतालमै २४ सै घण्टा खट्नु उनको कर्म बनेको छ । त्यसको अलवा उनी देशका दुर्गम जिल्लाहरुमा शिविर चलाउदै घुमिरहेका भेटिन्छन् । आफ्नै तलबको पैसाले औषधी किनेर उपचारमा पहूँच नपुगेका विरामीलाई निःशुल्क वितरण गर्नु नै , उनको जीवनको मूल धेय देखिन्छ ।
रामेछाप जिल्लाको दुर्गम गाँउ माकादुम गाविसमा जन्मिएर दोलखाको झुलेमा हुर्केका केसीको सानैदेखि एउटा दिव्य अठोट थियो । –‘डाक्टलर बन्ने ’ नभन्दै उनको सपना पुरा भयो । परिवारको एउटा सपना थियो जेठो छोराले अब राम्रो घरवार गर्ला, तर भइदियो उल्टो । उनी त अरु दुई भाईभन्दा भइदिए फरक र एक्लो ।
उनले विवाहको लेठो जिन्दगीसंग सम्झौता गर्नैै चाहेनन् । हालसम्म अविवाहित छन् डा.गोविन्द । उमेरले आधा शताब्दी उकालो काटिसके लाग्छ-एउटा यायावरीको जीवनभन्दा फरक छैन् । झण्डै दुई दशक उमेर प्राध्यापन र चिकित्सा क्षेत्रमा विताएका यी डा.संग सम्पत्तिको नाउमा एउटा ल्यापटप , एक थान टेलिभिजन र भर्खर मात्र किनेको एउटा मोवाइल छ । उनका एक जना विद्यार्थी डा. कमल क्षेत्रीको भाषामा भन्ने हो भने उनी हुन-‘एउटा सन्तचिकित्सक,सादगी र सौम्य ।’
उनले न परिवार जोडे न सम्पत्ति !
साथिभाइ बीच झट्ट हेर्दा अनौठा स्वभावका लाग्ने यी डाक्टर ‘यो जुगमा नसुहाउने जीव लाग्नु अस्वाभाविक हुदैन । ’न त साथीभाइसंग रमाइलो गर्छन ,न भोज भतेरमा रमाउँछन् । न त रमरवाफले नै यिनको मन तान्छ । उनको एउटै सपना छ –गरिब दुःखीको स्वस्थ्यमा साहारा दिनु । उपचारका क्रममा उनले संसार चाहारिसकेका छन् । उनी भन्छन्-“ विरामीको कुनै देश हुदैन ।”
सन् २००८ मा वर्मामा ठूलो आँधी आयो । आँधीले धेरै वर्मेली आहात भए । उनीसंग त्यस बेलाको एउटा अप्रिय घटना छ । त्यतिबेला वर्मा सरकारले विदेशीलाई आँधी प्रभावित क्षेत्रमा जाने अनुमती दिएको थिएन । तर डा. गोविन्द केसी एउटा शिक्षकको सहयोमा वर्मा पुगे,वर्मेली भेषमै । त्यहाँ उनले सयौको उपचार गरे । डाक्टरहरुलाई प्रशिक्षण दिए । त्यस बेला उनलाई र उनको सहयोगीलाई वर्मा सरकारले चिनेको भए १५ वर्ष जेल हाल्न सक्थ्यो । तथापि उनले वर्मेली जनताको दुःखमा साथ दिए । झिनामसिना कुरामा निडर उनी कैयन ठाँउमा आफ्नो प्राण समेत दाउमा राख्न पछि परेका छैनन् ।
१० वर्षे द्वन्द्वका समयमा पनि डा.केसी नेपालका धेरै दुर्गम ठाँउमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउदै हिड्थे । आफ्नो दु्ःखको लेखाजोखा भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्यमा मलम लगाउन पाएकोमा गर्व गर्दै हिँडे उनी । प्रतिकुल अवस्थामा पनि आफ्नो अडान नछाड्ने उनी विपन्नका साहरा र सारथी बन्न पुगे । एउटा गबिको झुपडिमा पुगेर उसको रोगलाई निदान गर्न पाउँदा डा केसीले आफ्नो जीवनको भने सुखदुःख विर्सन पुगेका छन् । भन्छन्-“थाहा छैन् ,सबैको मुटुसंग मेरो मुटु जोडिएको छ कि ! जहाँ रोग छ । दुःखपीडा छ त्यहाँ दौडिएर पुग्न मनलाग्छ ।
”सहरका चिल्ला सडकमा सुकिला गाडी कुदाउँदै क्लिनिक-क्लिनिक चहार्दै महंगो स्वास्थ्य सेवा दिएर आफ्नो ‘ब्राड नेम’ चलाउने डाक्टरहरुका लागि उनी सन्की र पागल लाग्न सक्छन् । तर दूरदराजका वस्तीमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदा ती विरामीका आँखामा उनी आर्दशपात्र लाग्नु अनौठो नहोला ।
सत्य सधै तीतो हुन्छ । हामीलाई थाहै छ – दर्शनिक सुकरात सत्य हुदाहुदै विष पिलाएर मारिए । महान धर्मगु्रु यशुख्रिष्टलाई क्रसमा झुण्ड्याइयो । भगवान वुद्धलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने हर्कत रचियो । गान्धीलाई गोली वर्षाइयो । महाकवि देवकोटालाई पागल घोषणा गरियो । लाग्छ डा. गोविन्द केसीले पनि जीवनकालमा पर्याप्त अपमान र पागलको उपमा समेत धारण गर्नुपर्यो । सत्यको पक्षमा लड्नेहरुले कतै विष पिउनु पर्छ । कतै सुलीमा चढ्नु पर्छ । कतै अपमान र तिरस्कार सहनु पर्छ । जो आज डा.केसीले भोगिरहेका छन् ।
उनी आमरण अनशन वसिरहेका छन् । तर माफियाको चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेका कतिपय सभासदहरु केसीका विरुद्धमा ‘ पाडे ’ गाली गरिरहेका छन् । उनकै क्षेत्रका केही अर्कमण्य र लोभी चिकित्सकहरु उनको अभियानमा तगारो बनिरहेका छन् । उनी यस्तो विषम् अवस्थाको संघारबाटै भनिरहेका छन्-“म गलुँला वा अनशन वस्दावस्दै मरुँला र मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा होला भन्ने सपना सरकारले देखेको छ भने त्यस्तो भ्रममा नबस्न म चेतावनी दिन्छु ”
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी जीवनमरणको सवालमा उभिएका छन् । मेडिकल कलेज स्वीकृत नगर्ने मनसाय उनले पटक्कै राखेका छैनन् । यद्यपी उनको एउटै माग छ – मानव स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनशक्तिको परिचयपत्रमा ‘यमराज’को प्रमाणपत्र नपुगोस् ।